Tobanka dhisme ee ugu qaalisan adduunka - Bulsho News
Waxaan daraasadda diiradda lagu saaray 30-ka dhisme ee ugu qaalisan adduunka iyadoo Sucuudiga ay ku yaallaan labada xarun ee ugu qaalisan adduunka oo uu kamid yahay Xaramka.
Sahanka MSN Money uu sameeyay sanadkii 2019-kii ayaa lagu ogaaday in Xaramka uu yahay dhismaha ku fadhiya qiimaha ugu qaalisan adduunka.
Daraasadda ayaa intaas ku dartay in ballaarinta iyo dayactirka sanado badan lagu sameynayay Xaramka ay horseeday in la geliyo agab badan oo qaali ah taasina ay ka dhigtay in uu noqday dhismaha ugu qaalisan adduunka oo uu ku fadhiyo $ 100 bilyan oo doolar.
Xaramka, Maka, wuxuu ku fadhiyaa $ 100 bilyan oo doolar
Xaramka iyo masaajidka ugu weyn adduunka ee ku yaalla magaalada barakeysan ee Maka, wuxuu sanad kasta qaabilaa Muslimiinta xujeyda ah oo gaareysa in ka badan 4 milyan oo qof, waxaana lagu qiyaasaa in dhismaha Xaramka la geliyay lacag gaareysa $ 100 bilyan oo doolar.
Waxaana kharashkan inta badan uu ku baxay agabka nashqadeynta iyo dayactirka Xaramka xilli uu isbaddalayo dhaqaalaha adduunka.
Dhismaha Abraj Al Bait, Maka wuxuu ku fadhiyaa $16 bilyan oo doolar
Xigashada Sawirka, @MSN Ahmad Faiza/Shutterstock
Dhismaha Abraj Al Bait, Maka
Dhismahan wuxuu ku yaalla meel u dhaw Xarameynka, waxaana la dhisay sanadkii 2012.
Waxaa lagu qiyaasa qiimaha lagu dhisay $16 bilyan oo doolar.
Abar Al Beit waxaa loo dhisay in uu qaado xajueyda gaar ahaan madaxda iyo dadka taajirka ah.
Waxaana dhismahan ku yaalla saacadda ugu weyn adduunka.
Abraj Al Beit waa dhismaha ugu qaalisan adduunka marka laga reebo Xarameynka.
Jasiirad loo damaashaad tego oo ku taalla Singapore
Xigashada Sawirka, @MSN Vichy Deal/Shutterstock
Jasiiradda loo dalxiis tego ee Marina Bay Sands oo ay ku yaallaan huteelo, waa dhismaha saddexaad ee ugu qaalisan adduunka, waxaana ku fadhiyaa qiimo lagu qiyaasay $6.2 bilyan oo doolar.
Marina Bay Sands waxaa la dhameystiray sanadkii 2010.
Xarunta shirkadda Apple, Cupertino
Xigashada Sawirka, @MSN Justin Sullivan/Getty
Apple Park, waa xarunta shirkadda Apple ee ku taalla Cupertino, ee gobolka California dalka Mareykanka,
Waana dhismaha afaraad ee ugu qaalisan adduunka.
Waxaana dhismaha lagu bixiyay qiimo dhan $ 5 bilyan oo doolar.
Dhismaha huteelka Cosmopolitan, Las Vegas
Xigashada Sawirka, @MSN Andrew Zarivny/Shutterstock
Ginin Cosmopolitan, Las Vegas
Dhismaha huteelka Cosmopolitan ee ku yaalla Les Vegas dalka Mareykanka ayaa la dhisay 2009.
Waxaana la geliyay dhismihiisa lacag gaareyso $ 3.9 bilyan oo doolar.
Huteelkan waxaa ku yaalla goobo waaweyn oo lagu caweeyo iyo 3,200 qolalka lagu qabto shirarka, waana dhismaha shanaad ee ugu qaalisan adduunka.
Xarunta cusub ee ganacsiga adduunka ee New York
Xigashada Sawirka, @MSN Dibrova/Shutterstock
Xarunta cusub ganacsiga adduunka ee New York,
Xarunta cusub ee ganacsiga adduunka ee New York, waa dhismaha lixaad ee ugu qaalisan adduunka, sida laga soo xigtay MSN Money.
Waxaana sanadkii 2012 lagu dhisay qiimo gaarayo $ 3.8 bilyan oo doolar balse haatan waxay ku fadhidaa $ 4 bilyan oo doolar.
Waa dhismaha haatan ugu dheer Mareykanka.
Dhismaha baarlamaanka Bucharest
Xigashada Sawirka, @MSN SF/Shutterstock
Dhismaha baarlamaanka Bucharest waxaa la dhisay sanadkii 1984, wuxuu ku fadhiyaa $ 3.9 bilyan oo doolar.
Dhismahan wuxuu ku yaalla dalka Romania.
Dhismaha Emirate Palace
Xigashada Sawirka, @MSN Courtesy Kempinski
Dhismaha iyo huteelka Emirate
Dhismaha iyo huteelka Emirate wuxuu ku yaalla magaalada Abu Dhabi, wuxuu u eg yahay qasriga madxtooyada, waxaana gudihiisa ku yaalla dhowro xarumood oo isugu jiro dukaamo waaweyn iyo huteelo kuwa raaxada ah.
Waxaana la dhisay 2005, waxaana qiimaha lagu dhisay lagu qiyaasay $ 3 bilyan oo doolar, qiimaha hadda uu ku fadhiyo ayaa ka badan midkaas.
Xarunta Wynn, Las Vegas
Xigashada Sawirka, @MSN GTS Productions/Shutterstock
Waxaa ku yaalla huteelada kuwooda ugu quruxda badan adduunka, waxaa sidoo kale ku yaalla goobo lagu caweeyo.
Sanadkii 2005, waxaa xarigga laga jaray xarunta Wynn, waxaa ku yaalla qolal gaaraya 2,716, waxaana dhismihiisa ku baxday $ 2.7 bilyan oo doolar, haatan wuxuu ku fadhiyaa in ka badan $ 3.4 bilyan oo doolar.
Qasriga boqorka Brunei
Qasriga Brunei ee Nuurul Iimaan
Qasrigan waxaa la dhisay sanadkii 1984, waxaa ku baxday $ 1.4 bilyan oo doolar.
Qasriga Brunei (Nuurul Iiman) waa qasriga ugu qaalisan adduunka, welina waa mid taagan.
Dhismahan wuxuu xarun u yahay dowladda Brunei, wuxuu ka kooban yahay qolal gaarayo 1,788, wuxuu qaadaya dad gaarayo 5,000 qof.
Sultaanka Brunei, Hassanal Bolkiah wuxuu kamid yahay dadka ugu taajirsan adduunka.